अवस्था चिन्ताजनक,अन्य जिल्लाको तुलनामा काठमाडौंको उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढेको – Khabar PatrikaNp
अवस्था चिन्ताजनक,अन्य जिल्लाको तुलनामा काठमाडौंको उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढेको
August 24, 2020 162
काठमाडौं । पछिल्लो समय अन्य जिल्लाको तुलनामा काठमाडौ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढेको छ । उपत्यकामा पनि काठमाडैमा नै संक्रमितको संख्या डरलाग्दो छ । काठमाडौं उपत्यकामा विहिवारसम्म करिव ३ हजार सक्रिय संक्रमित पुगिसकेका छन् । दिनहुँ झण्डै २ सयको संख्यामा नयाँ संक्रमित थपिन थालेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि पछिल्लो तथ्यांकले काठमाडौंको अवस्था अत्यन्तै चिन्तित बनेको बताएको छ ।
दिनहँ संक्रमित बढिरहँदा पनि किनमेल गर्ने ठाउँमा स्थानियको भिड उस्तै छ । माक्स लगायतका स्वास्थ्य जोगाउने उपाय लगाएका मानिस पनि कम देखिन्छन् । आइतवारसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने उपत्यकाका तीन जिल्लामा २ हजार ९६५ सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौंमा रहेका छन् । भक्तपुर र ललितपुरको तुलनामा काठमाडौं जिल्लामा जनसंख्या अत्याधिक रहेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा कोरानोको स्तर भयानक रहेको छ । काठमाडौंमा मात्रै शनिवारसम्म १ हजार ६०६ जना संक्रमित फेला परेका छन् । ३२ वटा वडामध्ये दुई वडामा १ सय भन्दा बढि संक्रमित फेला परेका हुन् । वडा नम्बर ३२ कोटेश्वरमा १२३ र वडा नम्बर २ महाराजगञ्जमा ११९ जना संक्रमित छन् । शनिवारसम्म महानगरमा कोरोना संक्रमित ८ जनाको निधन भएको छ ।
काठमाडौं महानगरले तयार पारेको तथ्यांक अनुसार मृ त्यु हुनेमा सबैभन्दा धेरै वडा नम्बर १० बानेश्वर क्षेत्रका छन । बानेश्वर क्षेत्रमा कोरोना संक्रमित ३ जनाको निधन भएको छ । त्यस बाहेक वडा नम्बर २७ महावौद्धमा २ जना, वडा नम्बर ४ बालुवाटारमा १ जना, वडा नम्बर १२ टेकुमा १ जना र वडा नम्बर २० भीमसेनस्थानमा १ जनाको निधन भएको महानगरले जनाएको छ ।
अहिले होम आइसोलेशनमा रहेका बिरामीको संख्या ४९७ रहेको छ । आइसोलेशनमा रहेका संक्रमितको सङख्या आठ हजार ७२४ रहेको छ । देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या जम्मा १३ हजार १५५ रहेको छ । संस्थागत आइसोलेसनमा नौ हजार २१२ जना रहेका छन् । होम आइसोलेशनमा तीन हजार ९४३ जना छन् । आइसियुमा उपचाररत १३७ जना छन् । बाग्मती प्रदेशका १० जना भेन्टिलेटरमा छन् ।
Prevकाम गर्दै गर्दा कोरोना सन्क्रमित भएछु , स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुहुने सबैमा धन्यवाद (सिमरन) मन छुने भिडियो
Nextयुवालाई पार्टीको नेतृत्वमा पुर्‍याउन ६५ कटेका नेताले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ : पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला
काठमाडौंमा भयाभह बन्दै कोरोना , शिक्षण अस्पतालका १३ डाक्टरसहित ७० जनामा देखियो कोरोना…….
भक्तपुरमा एकै परिवारका चारसहित आठ जनालाई कोरोना !
दुई मुखे सर्प देख्ने बित्तिकै लाइक गरी कमेन्टमा ॐ लेख्दै सेयर गर्दै जानुहोला..
बुद्धका १० कुशल कर्महरु: पढ्नुहोस्, तपाइँको जीवन बदलिनेछ….
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (25130)